China oem ezithambile bristles amancane ibhulashi ikhanda isixubho ifektri abakhiqizi | Enyuan
i-oem ithambile ibhulashi elincane lekhanda lokuxubha
Lo mkhiqizo ungasethwa ngemibala ehlukahlukene, futhi ikhanda lebhulashi liyinto enhle, engangena kalula esikhaleni somlomo. Amabhulashi wesixubho esithambile ahlelwe ngokuxinana, angahlanza igebe ngokujulile
igama lomkhiqizo isixubho esithambile
Impahla Bristle Intambo
Izinto zokubamba ibhulashi kk + tpe
Inhloko yebhulashi yalo mkhiqizo iyinhle, ama-bristles alungile, ukuhlangana kwabantu abaningi, kuhlelwe ngokulingene ukuhlanza amazinyo. Imicu yebhulashi mncane futhi ithambile, iletha umuzwa omusha wengcindezi ye-Aijie. Izibambo zebhulashi ziyahlukahluka, futhi ukwakheka okungasheleleki kuphephile futhi kusondele ukusetshenziswa.
Indlela efanele yokuxubha amazinyo akho
“Indlela yokuthatha ibhulashi”: Beka ichopho lebhulashi lamazinyo lapho kuhlangana khona izinsini nomqhele, cindezela kancane lapho uya khona amazinyo (hlikihla izinsini), hlikihla amazinyo aphezulu ukusuka phezulu phansi, futhi amazinyo aphansi kusuka phansi kuya phezulu; amazinyo angaphambili Kusuka ohlangothini olungaphakathi, yima ibhulashi lamazinyo olimini libheke ngakuyo indawo ebusweni be-occlusal; xubha indawo yangaphakathi, yangaphandle kanye ne-occlusal yethiphu lezinyo. Ngokuqondene nesikhathi sokuxubha, ngokuvamile imizuzu emi-3 ingcono, ukuze kube nesikhathi esanele sokuxubha zonke izingxenye zamazinyo. Abanye abantu abangaphandle kweChina baphakamise “uhlelo lwesithathu nantathu” lokuxubha amazinyo, okungukuthi, ukuxubha amazinyo akho kungakapheli imizuzu emithathu ngemuva kokudla oku-3, nokuxubha amazinyo imizuzu emithathu isikhathi ngasinye. Vele, ukuxubha amazinyo ekuseni nakusihlwa nokuhlanza umlomo wakho ngemuva kokudla ngokuvamile kwanele. Ngamafuphi, ukuqonda kahle indlela efanele yokuxubha kungavikela kahle amazinyo nezicubu ze-periodontal, ukuze amazinyo akho asebenze kangcono impilo yakho.
Langaphambilini I-Couple intambo ethambile ibhulashi lamazinyo
Olandelayo: Ibhulashi lamazinyo elicijile lamalahle
Gum Ibhulashi Lamazinyo Elithambile
Ibhulashi lamazinyo lezingane elithambile
Ibhulashi Lamazinyo Elithambile Kakhulu
I-Couple intambo ethambile ibhulashi lamazinyo
izinkulungwane eziyishumi zezinwele zezinyosi zithambile ...
Ibhulashi lamazinyo leSoft Bamboo elidala labadala
Isethi yamabhulashi woqalo
Ibrashi lamazinyo lisebenzisa ucingo lwenyiloni pbt